မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်	# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်Published March 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
နှစ်လကြာအောင် ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ (၇)ရက်သားသမီးဗေဒင်လေးကို ယခု မတ်လမှာ ပြန်ပြီး တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် မှန်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် အပျင်းပြေဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သတိထားမိဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ အဖြေထွက်တဲ့ လူတွေလည်း စိတ်ချမ်းသာ စေချင်သလို မကောင်းတဲ့ အဖြေထွက်တဲ့ လူတွေလည်း သိပ် အစွဲအလန်း မထားကြပါနဲ့။ (၇)ရက်သားသမီး “ယေဘူယျ တွက်ကိန်း” မျှသာ ဖြစ်လို့ လူတိုင်း လူတစ်ဦးခြင်းစီအတွက် မမှန်နိုင်ပါ။ မကောင်းတာရှိရင် ကြိုတင် သတိထားစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ မကောင်းတဲ့ ဟောကိန်းလေးတွေကိုလည်း ထည့်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။
ယခုလတွင် ကံဇာတာ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု များပြားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် ၊ အောင်မြင်ရေး နဲ့ ပညာရေးကံများ ကောင်းနေပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများ ကံဇာတာမြင့်မားနေပြီး ဉာဏ်၊ ၀ီရိယ စိုက်ထုတ်နိုင်ရင် ထုတ်သလောက် အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ့် လ, ဖြစ်တယ်။ ရာထူးတက်စရာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းများ ရာထူးတက်ဖို့ ရှိနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာဌာန အပြောင်းအရွှေ့မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့ ကြံရွယ်ထားသူ စီးပွားရေးသမားများ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ဖို့လည်း များပါတယ်။
အချို့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများမှာ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာရှိနိုင်တယ်။ ငွေကြေးအကျပ်အတည်း နှင့် အဆုံးအရှုံးများ ရှိနိုင်တယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု ၊ ငွေကြေးချေးငှားမှုများ သတိထားပါ။ ယာဉ်ကားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ မှာလည်း အမှားအယွင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထိအခိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံ မကောင်းသေးပါ။ ချစ်သူနှင့် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေအရင်းအချာတစ်ယောက်နဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားမှု ၊ ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားမှု ဖြစ်ရဖွယ် ရှိတယ်။ သားသမီးရှိသူများ သားသမီးအတွက် ပူပန်သောက ရောက်စရာ ကြုံရတတ်တယ်။ ခရီးသွားလာရေးအတွက် ကြံစည်ထားတာတွေ ပျက်တတ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် အဆင်မပြေသော ခရီးများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ပြုလုပ်ရဖွယ်ရှိပြီး တရားစခန်းဝင်မည့်သူများ ၀င်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အတိတ်ပါရမီပါရင် “တရားထူး” ရနိုင်တဲ့ လ,ဖြစ်တယ်။ ခြုံပြောရရင် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ယခုလအတွက် ကံဇာတာ အကောင်းဖက်ကို ပိုများပါတယ်။ ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး နဲ့ ဆုံးထားသူများ ကံဇာတာကောင်းမွန်မှုများကို အထူးရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု)ဆုံးထားသူများ အိမ်ထောင်ရေး ၊ လူမှုရေး ပြဿနာများနိုင်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်ပါတယ်။ ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - မိမိနေအိမ်ဘုရားမှာ “ပဲပြုတ်ဆီဆမ်းပြီး ဆွမ်းနဲ့အတူ” တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်စောစောမှာ ကပ်လှူပူဇော် လိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင်Published December 16, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီ ပို့စ်ကို ၀င်ကြည့်နေသူတွေများလို့ Check လိုက်တော့ (၂၀၁၁) ဒီဇင်ဘာလ ဟောကိန်း ကို (၂၀၁၂) ဒီဇင်ဘာလအမှတ်နဲ့ မှားပြီး ၀င်ကြည့် နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ မနှစ်က ဟောကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုနှစ်ကို သေသေချာချာကြည့်ပေးပါ။ မနှစ်က ဟောကိန်းပါ။
ဒီလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းတွေကို မတင်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် အီးမေးလ်တွေ နဲ့က တစ်မျိုး ၊ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောတာက တစ်ဖုံ ၊ တစ်ပူပူတစ်ဆာဆာ လုပ်နေကြလို့ ရက်နောက်ကျနေပေမယ့် တင်ပေး လိုက်ရပြန်ပါပြီ။ ဒီလထဲမှာ လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့ နေရာက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က အဝေးသင်ဖြေဖို့ ခွင့်ယူသွားတာက တစ်မျိုး၊ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက် Car Accident ဖြစ်တာကတစ်မျိုးနဲ့တော်တော် အလုပ်များ ၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးနေလို့ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာတွေဖက်ကို ဦးမလှည့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကွန့်မန့်တွေ / အီးမေးလ်ထဲကနေ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးကို အားနာပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အားကိုးတကြီး အကူအညီတောင်းကြပေမယ့် ကိုယ်ဘက်က ချက်ခြင်းလုပ်မပေးနိုင်တာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လစဉ်ဟောကိန်းတွေကိုမှ တင်မပေးနိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ကို မလေးမခန့်လုပ်ရာ ကျတော့မှာမို့ အလုပ်မအား အားအောင်ယူပြီး (၇)ရက်သားသမီးဟောကိန်းများကို တင်ပေး လိုက်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလမှာ တစ်ချို့နေ့သားသမီးတွေအတွက် နည်းနည်း အရေးကြီးတဲ့ လ, လည်းဖြစ်နေတာကြောင့် တင်ပေးမှ တော်မယ် ထင်လို့ပါ။ လ, က တစ်ဝက်ကျိုးနေပြီဆိုတော့ အမှား/အမှန်ကို ပိုပြီး တိုက်ဆိုင်လို့ ရတာပေါ့။ ကဲ – ကြည့်ကြရ အောင်လား။
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ယခုလမှာ ကိုယ်ပင်ပန်း ၊ စိတ်ပင်ပန်းမှု များမယ်။ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ များပြားလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး ကျဆင်းနိုင်တယ်။ မိမိ ဆွေမျိုး ၊ မိတ်သင်္ဂဟများအတွင်း နာရေးကိစ္စပေါ်မယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ရောက်တတ်တယ်။ (လူနာမေးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။ ဘာသာရေး ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ရဖွယ် ရှိတယ်။ နာမည်ကျော်ကြားကိန်း ရှိတယ်။ ကောင်းသတင်းလည်းဖြစ်နိုင်သလို ၊ မကောင်းသတင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ ၀န်ထမ်း များအတွက် ကိုယ့်အပေါ်မှာ မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ရဲ့ ပညာပြတာကို ခံရနိုင်တယ်။ (မနိုင်ဝန် ထမ်းခိုင်းတာမျိုး)။ အချို့ဝန်ထမ်းများမှာ နေရာအပြောင်းအလဲ ၊ ဌာနအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်ရှိနေရာထက် ပိုပြီး တာဝန်ကြီးတဲ့ နေရာ/အလုပ်မျိုးပေါ့။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကံ မကောင်းလှသေးပါ။ ချစ်သူအတွက် ပူဆွေး သောကရောက်ရကိန်းမျိုး ရှိတတ်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ယခုလမှာ ရန်သူပြိုင်ဖက်များအပေါ် (ပရိယယ်သုံးပြီး) အနိုင်ရကိန်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်ပြိုက်ဘက်ကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ သဘောထားပြီး သတိလက်လွတ် နေရင်တော့ ကိုယ်ခံရမယ်။ ဒီလထဲမှာ မကြေမလည်ဖြစ်နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ ၊ ပါတနာများနဲ့ ပြန်လည် ပြေလည်မှု ရနိုင်တယ်။ ဒီလဟာ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် သိပ်ပြီး ကောင်းတယ်လို့ မပြောနိုင်ပေမယ့် သိပ်ပြီး ဆိုးစရာလည်း မရှိနိုင်တဲ့ လ, တစ်လလို့ဘဲ ယူဆမိပါတယ်။
ယခုလအတွက် နာမည်မှာ – တနင်္ဂနွေ စပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေနံတွေနဲ့ အဆုံးသတ်မှည့်ထားတဲ့ နာမည်ပိုင်ရှင်တွေ အညံ့ များမယ်။ ကျန်နေ့နံ အဆုံးသတ်များကတော့ ကံဇာတာ အသင့်အတင့် အကောင်း/အညံ့ရှိပါမယ်။
ယတြာပြုလုပ်လိုလျှင် – ပဲပေါင်မုန့် တစ်လုံးကို နေအိမ် ဘုရားမှာ ကပ်လှူလိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင်Published November 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလတွင် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ကံဇာတာ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်မည်။ ဘုန်းကံမြင့်ချိန်ဖြစ်မည်။ မိမိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တိုးတက်မြင့်မားမည်။ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးများ တိုးတက်အောင်မြင်မည်။ ဖခင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းမှုကို ခံစားရနိုင်သည်။ ခရီးသွားလာမှု ကိစ္စရပ်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားမည့်သူများ အလွယ်တကူ ထွက်ခွာခွင့် ရမည်။ အိမ်ထောင်ပြုရန် စီစဉ်ထားသူများ အိမ်ထောင်ကျမည့် လ, ဖြစ်သည်။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ ကံကောင်းနေမည်။ စန်းပွင့်မည့် လ, ဖြစ်သည်။ ၀တ်ကောင်းစားလှများ ၊ အိမ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ ၀င်ကိန်းရှိသည်။ သို့သော် ဆွေမျိုးသားခြင်း ဒုက္ခပေးကိန်း ရှိသည်။ လူယုံ သတ်ကိန်း ရှိတတ်သည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖျားခံရမှုမျိုး ရှိနိုင်သည်။ ငွေလိမ်ခံရတတ်သည်။ ယခုလတွင် စက်ပစ္စည်း ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထူးသတိထားပါ။ အပူလောင်တတ်သည်။ ဓာတ်လိုက်တတ်သည်။ အဆိပ်ရှိသော သတ္တ၀ါများ အကိုက်ခံရတတ်သည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အပြိုင်အဆိုင်နှင့် လုပ်ကိုင်ရသူများ ပြိုင်ဘက်များအပေါ်တွင် အသာစီးရလိမ့်မည်။ အမှုအခင်းဖြစ်ပွားနေသူများဖြစ်လျှင် မိမိဘက်မှ အမှုနိုင် ကိန်းရှိသည်။ နာမည်နှင့် လုပ်စားသူများ နာမည်အလွန်ကြီးကိန်း ရှိသည်။ ယေဘူယျ ခြံပြောရလျှင် ယခုလသည် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ကံဇာတာ အကောင်းဖက်မှ ပိုများသော လ, တစ်လဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် – တနင်္ဂနွေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ နှင့် သောကြာနံများဖြင့် ပိတ်ထားသူများ အထူးကံကောင်း နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုများမည်။ အင်္ဂါ နှင့် စနေနံများနှင့် ပိတ်ထားသူများ ကံအနည်းငယ် ညံ့ဖွယ်ရှိသည်။ ကျန်နေ့နံများဖြင့် ပိတ်ထားသူများ ကံဇာတာ သင့်မြတ်ပါသည်။
ယတြာပြုလိုပါက – စနေနေ့တစ်နေ့တွင် မိမိဖိနပ်အဟောင်းတစ်ရံကို ထုံးအနည်းငယ်သုတ်ပြီး ရေတွင် မျှောလိုက်ပါ။ ထို့နောက် မိမိမွေးနေ့တွင် သံဃာတစ်ပါးအား ဖိနပ်တစ်ရံ လှူဒါန်းလိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်Published October 3, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလတွင် အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်း စိတ်ကူးကောင်းများကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမည်။ မိမိ၏ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စများကို ထုတ်ဖော်ပြသခွင့် ရရှိနိုင်မည်။ အလုပ်ခွင်တွင် နာမည်ကောင်းထွက်တတ်ပြီး အဆင့်မြင့် တာဝန်များ ပေးအပ်ခံရတတ်သည်။ သက္ခတ်ကောင်းတွင် ကျရောက်နေလျှင် (၀န်ထမ်းများ) ရာထူးတက်ကိန်း ရှိနိုင်သည်။ အိုးအိမ် ယာဉ်ကားနှင့် ပတ်သက်နေသော ကိစ္စများတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြမှုများ များနေတတ်သည်။ သို့သော် ထိုယာဉ်ကားမှ အကျိုးအမြတ် များစွာ ရရှိလိမ့်မည်။ အလုပ်ခွင်ထဲ၌ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ ခရီးရှည် (သို့) နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ရန် ကိစ္စများ ပျက်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ရေး မသာမယာဖြစ်နေမည် (သို့) အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့နေတတ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အနည်းငယ် ချုခြာနေတတ်သည်။ သားသမီးရှိသူများ သားသမီး အကျိုးခံစားရမည်။ ဘာသာရေး နှင့် ပတ်သတ်သော ကိစ္စများ တာဝန်ပျက်ကွက်နေတတ်သည်။ ယေဘူယျ ပြောရလျှင် ယခုလသည် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ကံကောင်းမှု အနည်းငယ်ပိုများနိုင်သော လ, တစ်လဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်။
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် - တနင်္ဂနွေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ နှင့် စနေ နံများဖြင့် ပိတ်ထားသူများ အထူးကံကောင်း နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုများမည်။ ဗုဒ္ဓဟူး, ရာဟု နှင့် သောကြာ နံဖြင့် ဆုံးသူများ ကံဇာတာ သင့်သည်။ ကြာသပတေးနံဖြင့် ပိတ်သူများ ကံအနည်းငယ် ညံ့ဖွယ်ရှိသည်။
ယတြာပြုလိုပါက - တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် နာနတ်ယို ၊ နာနတ်သီး ၊ နာနတ်ဖျော်ရည် တစ်ခုခု ကပ်လှူပေးပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဇူလိုင်လ ဟောကိန်းများPublished July 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ကံဇာတာ ညံ့ဖွယ်ရှိတယ်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရမယ်။ အဖျားအနာ ရှိတတ်တယ်။ နာမည်ပျက်ကိန်း ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းကိန်း ရှိတတ်တယ်။ ပြည်တွင်းခရီး ၊ နိုင်ငံခြား ခရီးတွေ ထွက်ဖို့ ရှိပေမယ့် ခရီးစဉ် အဆင်မပြေတတ်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြား သွားမည့်သူများ ရေခြားမြေခြားရောက်မှ မကျန်းမာခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေခြင်း ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ခြင်းများ ရှိနိုင်တယ်။ အင်္ဂါနံ ပစ္စည်း ၀င်ကိန်း ရှိတယ်။ ကွဲကွာနေတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ များ ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်နေတဲ့ စက်ပစ္စည်း ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ၊ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ပစ္စည်း တစ်ခုခု ၀ယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အကြီးအကဲ ၊ အစိုးရနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိစ္စများ အောင်မြင်ကိန်း ရှိတယ်။ အထက်လူကြီး ၊ အကြီးအကဲရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှု ၊ အခွင့်အရေးပေးမှု ရနိုင်တယ်။ အချို့သော တနင်္ဂနွေ သားသမီးများမှာ လိင်ကိစ္စ အရှုတ်အထွေးများ ပေါ်ပေါက်ကိန်း ရှိတတ်တယ်။ ဒီလထဲမှာ အိုးအိမ် ၊ အဆောက်အဦးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စများ ကံမကောင်းနိုင်ပါ။ အသက်ကြီးသူ ဖခင်ရှိပါက ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ခိုင်းပါ။ မမာမကျန်းဖြစ်တတ်တယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသူများ ၊ တိုင်စာ အပစ်ခံထားရသူများ ဒီလထဲမှာ အလုပ်ပြုတ်ကိန်း ရှိတယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စ ကံမကောင်းနိုင်ပါ။ မိမိ ချစ်သူနဲ့ စကားများ ၊ ရန်ဖြစ်ရကိန်း ရှိတယ်။
နာမည်မှာ တနင်္ဂနွေနံ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေနံ ၊ တနင်္လာနံ ၊ သောကြာနံ များနှင့် “ပိတ်” ထားသူများ ဒီလထဲမှာ အညံ့များနိုင်တယ်။ အထူးဂရုစိုက်ပါ။
ယတြာကတော့ – အုန်းသီးတစ်လုံးပေါ်မှာ ထုံးနဲ့ “သုည” တစ်လုံး ရေးဆွဲလိုက်ပြီး အုန်းသီးကို ရေမှာ မျှောလိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဇွန်လ ဟောကိန်းများPublished June 1, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ကံဇာတာ ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေး စီးပွားဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကံကောင်းနိုင်တယ်။ ငွေစုငွေပုံဝင်ကိန်း (သို့) လုပ်ငန်းမှ ၀င်ငွေအမြတ်အစွန်း များပြားကိန်း ရှိတယ်။ ဒီလမှ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ စုတ်ရော ၊ လာဘ်ပါ ကောင်းမွန်နေပြီး အချစ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေးတွေ လည်း အဆင်ပြေတတ်တယ်။ လက်ထပ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်တဲ့ လ, ဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နာမည်ကောင်းထွက်မယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေ အဆင်ပြေချောမွေ့နေမယ်။ ဒီလထဲမှာ မကောင်းတာတစ်ခုက ငွေလူလိမ်ခံရကိန်း ၊ အလဟသ ဆုံးရှုံးရကိန်းမျိုး ရှိတတ်ပေမယ့် သိပ်တော့ အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါ။ ဒီလထဲမှာ ပစ္စည်းအ၀ယ်မှားတာ ၊ ငွေကျပျောက်တာမျိုးရှိရင် မကောင်းတာ ယတြာကျေသွားတယ် လို့ အောက်မေ့လိုက်ပါ။ ဒီလထဲမှာ အထူးရှောင်ရမှာက “ပွပေါက်” ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ သူများ လာဆွယ်ရင် ငြင်းလိုက်ပါ။ လိမ်ညာမှု တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အလုပ်ရာထူး တိုးဖို့ ရှိသူများ ဒီလထဲ ရာထူးတိုးတာဖြစ်စေ ၊ နေရာကောင်းရောက်တာမျိုးဖြစ်စေ ကြုံရနိုင်တယ်။ ထီပေါက်ကိန်း ရှိတာမို့ (အောင်ဘာလေ) ထီလေး နည်းနည်းပါးပါး ထိုးထားပါ။
ယတြာကတော့ – ဘုရားမှ လဘ္ဘက်သုပ် နဲ့ ဆွမ်း ကပ်လှူလိုက်ပါ။
တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ဒီလမှာ အခက်အခဲ အဖုအထစ် များမယ့် လ, တစ်လ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကောင်းတာလည်း ရှိမယ်။ ညံ့တာလည်း ရှိမယ်။ ငွေကြေး ၊ စီးပွား ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ လူမှုဆက်ဆံရေး ပိုင်းတွေ မှာ ကောင်းမွန်တတ်ပြီး ကျန်းမာရေး အထူးညံ့ဖွယ် ရှိတယ်။ သက္ခတ် ညံ့ရင် ဆေးရုံဆေးခန်း တက်ရောက် ကိန်းရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ များရဖွယ် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေမျိုးတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “ဗုဒ္ဓဟူးသက္ခတ်” အတွင်း ရောက်နေရင်တော့ ကျန်းမာရေး ပိုပြီး သတိထားပါ။ သားသမီး ရှိသူများ သားသမီးအတွက် စိတ်သောက ရောက်ရကိန်း ရှိတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးက ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းသတင်း ဖြန့်တာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ ရွှေဝင်ကိန်း ရှိသလို ရွှေပြန်ထွက်ကိန်းလည်း ရှိတယ်။ ဒီလ တစ်လလုံး စိတ်ပူပင် သောက များတတ်ရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုလည်း များတတ်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဆွေမျိုး ဧည့်သည် လူဝင်လူထွက်များပြီး ဧည့်တာဝန်တွေ ဖိစီးနေရတတ်တယ်။ လူလိမ်လူကောက် သတိထားပါ။ လူလိမ်ခံရကိန်း ၊ သူခိုး ခိုးခံရကိန်းတွေ ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့အစီအစဉ် ရှိသူများအတွက်တော့ ကောင်းမြတ်ခမ်းနားတဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားမျိုး လုပ်ရဖွယ် ရှိပါတယ်။
ယတြာကတော့ – သရက်သီးမှည့်ကို ဘုရားမှာ ကပ်လှူလိုက်ပြီး မိမိမစားဘဲ စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင် | 18 Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,651)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,739)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,353)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,419)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,562)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,585)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,952)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,292)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,096)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,050)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,834)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,798)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,302)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,131)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,834)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,491)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,167)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,681)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,585)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,550)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,261)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,241)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,900)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,690)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,477)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,023)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !
20 Users Online	Link1 | Link2 | Link3Copyright © 2013. Compu BayDaThuKhuMa. Designed by CompuBayDaThuKhuMa.